९४ करोडभन्दा बढी खुद नाफा गरेको बङ्गलादेश बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४६ करोडभन्दा बढी
१ &nbspघण्टा १६ &nbspमिनेट
माघ १३, काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण मंगलवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार यस वर्ष कम्पनीले रू. ९४ करोड १२ लाख ५५... विस्तृतमा »
५ &nbspघण्टा ५
५ &nbspघण्टा ५१ &nbspमिनेट
दोस्रो त्रैमासमा अपि पावरको नाफा ३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि
खोटाङमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको १ः१ हकप्रद आजबाट निष्कासन सुरु
सामुदायिक लघुवित्तको सातौं वार्षिक साधारणसभा फागुन ५ गते हुने
‘सानिमा लार्ज क्याप फण्ड’ इकाईमा आवेदन दिने मिति थप
कामना सेवा विकास बैंक : कम्पनी प्रोफाइल (मंगलवार, १३ माघ २०७७)
पोखरा फाइनान्स : कम्पनी प्रोफाइल (मंगलवार, १३ माघ २०७७)
व्यङ्ग्यार्थ : मंगलवार, १३ माघ २०७७
उदयपुर सिमेन्टको उत्पादन नियमित
स्वदेशी प्याकेजिङ उद्योग प्रवर्द्धनको नीति बजेटमै सीमित
तथ्यांकोवाच : लेड अक्साइडको आयात प्रवृत्ति
अरुणभ्याली हाइड्रोको नाफा २ गुणाले बढ्यो
१ &nbspघण्टा २७ &nbspमिनेट
माघ १३, काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म गत वर्षभन्दा २ गुणा बढी खुद नाफा गरेको छ । मंगलवार सार्वजनिक कम्पनीको वित्तीय विवरण अनुसार यस वर्ष रू. ६ करोड ८० लाख ५३ हजार खुद नाफा गरेको हो । यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिसम्म रू. ३ करोड ३६ लाख ८२ हजार थियो । यस वर्ष विद्युत विक्...
काठमाडौं । कार्पेटको बजारमा करीब आधा अंश ओगटेको यति कार्पेट ३ वर्षअघि भीषण आगलागीबाट पूर्णरूपमा प्रभावित भयो । आगलागी हुँदा ४० करोडभन्दा बढीको क्षति केडिया अर्गनाइजेशनले बेहोर्नुपर्‍यो । व्यावसायिक जगत्मा पुरानो घरानाका रूपमा लिइने केडिया अर्ग......
काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट नियमित रूपमा सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण बन्दाबन्दी र कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुँदा छिटपुट रूपमा उत्पादन हुँदै आएको सिमेन्ट आइतवारदेखि नियमित हुन थालेको हो । लामो समयदेखि महा......
कृषिमा विदेशी लगानीविरुद्ध माघ १४ बाट आन्दोलन
सीताराम गोकुल मिल्क्स रू. ५ करोड लगानी थप्दै
माघ १३, काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण मंगलवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार यस वर्ष कम्पनीले रू. ९४ करोड १२ लाख ५५ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म बैंकको यो नाफा र......
ग्लोबल आइएमई बैंक–भण्डारा दुग्ध उत्पादक सहकारी सम्झौता
काठमाडौं (अस) । कृषि अनुदान कर्जामा साना किसानको पहुँच बढाउन ग्लोबल आइएमई बैंक र भण्डारा दूग्ध उत्पादक सहकारी...
एनसिएचएल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र आइएमइ पेबीच राजस्व संकलन सम्बन्धी सम्झौता
आक्रामक फ्रेन्चाइज बजार विस्तार गर्दै साथीमार्ट
आइतवार ३०० ले ओरालो लाग्यो सुनको भाउ, चाँदीको मूल्य भने स्थिर
दोलखामा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण सुस्त
जडीबुटी खेतीको विस्तारमा योजनाबद्ध काम
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट तीन वर्षमा ४२ विधेयक पारित
वीउवा संघले गर्‍यो महासंघका सदस्यलाई सम्मान
माघ १३, खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ७५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । नेपालमा भूकम्प गएको पाँच वर्षपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सोमवार......
माघ १२, सियाटल (अमेरिका) । अमेरिकी विमान निर्माता कम्पनी बोइङको बोइङ ७३७ म्याक्सलाई अहिले नै उडानको अनुमति दिनु अति चाँडै भएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कम्पनीको सियाटलस्थित कारखानाका एक पूर्व व्यवस्थापकले विमानको सुरक्षाबारे नयाँ चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पाँच महीनाभन्दा कम अवधिभित्रै २ ओटा विमान दूर्घटनाग्रस्त हुँदा सयौं मानिसको ज्यान गएपछि सन् २०१९ मा विश्वभर विमान ग्रान्डेड गरिएको थियो । तर केही समयअघि उत्तर अमेरिका र ब्राजिलले विमानलाई उडानको अनुमति दिएको थियो । यूरोपमा पनि यसै हप्ता अनुमति मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि......
औद्योगिक विकासको अवरोधक
नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)बीच पुस २५ गते हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने सम्झौता भयो । सम्झौतापत्रमा केयूबाट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डीन डा. डम्बरबहादुर नेपाली र निगमबाट निर्देशक दीपक बरालले हस्ताक्षर गरेका थिए । विदेशबाट इन्धन ल्याए......
आईपीओ, म्युचुअल फन्ड र बुकबिल्डिङको घनचक्कर
अब बैंकिङ नेटवर्क मार्केटिङ
तस्वीर : इजरायलको श्रम बजारमा नेपाली कामदारको रोजगारीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर
तस्वीर : जुम्लाका कृषक स्याउको बोटमा कीटनाशक औषधि छर्किदै